Olona 8 no matin'ny fianjerana fiaramanidina rosiana An-72 tany Kongo
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Olona 8 no matin'ny fianjerana fiaramanidina rosiana An-72 tany Kongo
Rosiana nataon'olombelona An-72 nianjera ny fiaramanidina fitaterana Repoblika Demokratikan'i Congo.
Ny tompon'andraikitra misahana ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny Masoivohon'i Rosiana any Kongo dia nanambara fa ny olom-pirenena Rosiana dia isan'ireo ekipan'ny fiaramanidina. Raha ny fanazavany dia manazava ny anaran'ireo niharam-boina ny masoivoho.
Talohan'izay dia nitatitra ny fampahalalam-baovao DRC fa nianjera tany amin'ny faritra avaratry ny firenena ny fiaramanidina An-72. Nanidina avy tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Goma nankany Kinshasa ny fiaramanidina, saingy rehefa afaka adiny iray teny amin'ny rivotra dia nijanona tsy nifandray tamin'ny foibe fanaraha-maso ny sidina ary nanjavona avy teo amin'ny efijery radara. Ny serivisy vonjy taitra dia nanamafy ny fianjeran'ilay fiaramanidina.
Fiaramanidina mpitondra entana no nitondra mpandeha sy ekipa valo, anisan'izany ireo mpiasan'ny filoham-pirenena DRC.